नयाँ बीमा योजना निर्माणमा केन्द्रित छौ- पोषक राज पौडेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स – Insurance Khabar
नयाँ बीमा योजना निर्माणमा केन्द्रित छौ- पोषक राज पौडेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स
प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०७५, आईतवार ११:१६
पोषक राज पौडेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स
फाईनान्सियल कन्सल्टिङ्गबाट आफनो करिअर सुरु गरेका पोषक राज पोडैल अहिले सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनले कन्सल्टिङ्गमा ६ वर्ष काम गरे । त्यसपछि उनले मेट लाईफ इन्स्योरेन्समा प्रवेश गरे । जहाँ उनले १५ वर्ष विताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका छन् । त्यस्तै अमेरिकाबाट फेलेसिप इन लाईफ इन्स्योरेन्स म्यानेजमेन्टको अध्ययन पनि पुरा गरेका छन् । नयाँ कम्पनीहरु खुलेसँगै बजारमा प्रतिस्पर्धा बढी रहेको चर्चा चलिरहेका बेला उनी भने नयाँ बीमा योजना सञ्चालन गरी बीमितलाई आकर्षण गर्न सकिनेमा ढुक्क छन् । उनै पौडेलसँग बर्तमान बीमा बजारको अवस्था र कम्पनी रणनीतिको बारेमा इन्स्योरेन्सखबरकर्मी रिना खत्रीले गरेको कुराकानीको सार:
अहिलेको बीमा बजारलाई कसरी मूल्याङकन गर्नु हुन्छ ?
बीमा बजार एकदमै राम्रो छ । बीमा जनचेतना पनि बढ्दै छ । यसको महत्व पनि उत्तिकै बढेको छ । सरकारले पनि यसलाई महत्व दिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा ल्याएर अझै यसलाई व्यापक रुपमा अघि बढाईरहेको छ । सम्रगमा भन्नु पर्दा यसको बजार उत्साह पूर्वक नै रहेको मान्न सकिन्छ । तर, धेरै मानिसहरु यसमा समेटिएका छैनन् । समेट्न सक्ने थुप्रै बाटोहरु छन् । बजार खाली नै रहेको छ । बीमामा १० देखि १२ प्रतीशत मात्र मानिसहरु समेटिएको छ । त्यसैले मानिसलाई बीमा प्रति आकर्षित गर्न सक्ने भने यसको बजारमा व्यापक छ ।
नेपालमा पहिले नै यति धेरै जीवन बीमा कम्पनी छन् ? त्यसमा पनि अहिले एकै पटक धेरै कम्पनी खोलिए । कम्पनीहरु बिच कतीको प्रतिस्पर्धा छ ?
प्रतीस्पर्धा हरेक क्षेत्रमो हुन्छ । प्रतीस्पर्धाले ग्राहकलाई फाईदा नै गरेको छ । कम्पनी नयाँ आए सँगै नयाँ पोलिसी र बीमीतलाई कसरी आर्कषण गर्न योजना ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा रहेको हुन्छ । यसमा सबैजनालाई समेट्न सकिएको छैन । नयाँ कम्पनी बजारमा भित्रिएसँगै बजारमा चेतना बढाउने र बीमीत बढाउने काम भएको छ । हाल व्यापार बढाउन खासै त्यस्तो प्रतिस्पर्धा भएको पाईदैन ।
नेपालमा बीमा कम्पनीहरुको सङख्या धेरै भएको विज्ञहरु बताउँछन् । तपाईलाई के लाग्छ, यति धेरै कम्पनीहरु बजारमा धानीन सक्छन् त ?
बैंकको क्षेत्रमा पनि नयाँ बैंकहरु विस्तार भएसगै यसको बजार निकै राम्रो भएको छ । नयाँ बैंकको सुरुवात सगै बैकिङ क्षेत्रको पहुँच ४० देखि ५० प्रतिशत पुगेको छ । बीमाको क्षेत्रमा पनि नयाँ कम्पनीहरु विस्तारै भित्रिदै छ । विगतको कुरा गर्ने हो भने सन् २००१ मा बीमा कम्पनीहरु नयाँ आएसँगै बीमा बजार बढेको थियो र फेरी थप भएसँगै बीमा बजार बढेको देखीन्छ । नयाँ कम्पनीहरुको वृद्धि भएसँगैे बजार बढीरहेको छ । हाल नेपालमा बीमाको पहुँच १२ प्रतिशत मात्रै छ । अन्य मानिसहरुलाई अझै बीमा समेट्न सकिएको छैन । त्यसैले सबैले कम्पनीले काम गर्ने हो भने बीमाको पहुँच पनि बढ्नेछ र कम्पनीहरु धानीन पनि सक्नेछन् ।
नयाँ कम्पीहरुले पुरानै कम्पनीहरुको प्रडक्ट बिक्रि गरिरहेका छन् ? किन नेपालको आवश्यकता अनुसार बीमा योजना निर्माण गरीदैन ?
थुप्रै कम्पनीहरुले नयाँ ल्याउने प्रयास गर्दैछन् । हाम्रो कम्पनीेले एकदमै नयाँ प्रडक्ट ल्याएको छ । नेपालमै पहिले पटक जीवन सारथी भन्ने प्रडक्ट ल्याएका छौ । जुन नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले यस्तो प्रडक्ट ल्याएको छैनन् । २० वटा घातक रोगहरुको लागि हामीले प्रडक्ट ल्याएका छौ । हामीले नयाँ खालका प्रडक्ट ल्याउँने प्रयासमा छौ । हामीले प्रडक्ट सेल गर्दा हामीले ग्राहककको मर्म बुझनुपर्दछ । जसले गर्दा अझ राम्रो हुन्छ । हाल ग्राहकको माग अनुसार घातक रोग सम्बन्धि प्रडक्टको माग बढी रहेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले नयाँ बीमा विधेयक ससंदमा दर्ता गरेको छ । तपाईको बिचारमा नयाँ विधेयक कस्तो हुनुपर्दछ ?
यसमा मुख्यत बीमा विस्तारको लागि बीमा समिती, बीमा कम्पनी, अभिकर्ता र बीमाको क्षेत्रमा काम गर्न व्यक्तिहरुको लागि काम गर्न सहज वातावरण तयार गरिदिनुपर्दछ । सरकारले बीमा पहुँच वृद्धि गर्ने खालका रणनीति नयाँ विधेयकमा राख्नुपर्दछ ।
बीमा अभिकर्ताले एउटा भन्दा बढी कम्पनीमा काम गर्न पाउने माग गरेका छन् यो कतीको जायज छ ?
यो एउटा सिद्धान्तको कुरा हो । विदेशको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्ने हो भने अभिकर्ताहरुले एउटै कम्पनीमा मात्र काम गरेको पाईन्छ । विदेशमा एउटा काम गरेको प्रयासहरु देख्न सकिन्छ । एउटा कम्पनीले अभिकर्ताको सिप क्षमता वृद्धिको लागि केही बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । उसले त्यहाँबाट थुपै कुरा सिक्ने अवसरका साथै, एउटा कम्पनीमा काम गर्दा उनीहरुमा व्यवसायिकता बढी हुन्छ ।
नयाँ कम्पनीहरुले अभिकर्ताको लागि पनि सेयर वितरण गनुपर्नेे माग गरेका छन् । यसलाई कम्पनीले कसरी लिएको छ ?
यो एउटा नीतिगत कुरा हो । नियामक निकायले जस्तो खालका निर्देशन दिन्छ कम्पनीहरुले सोही अनुरुप काम गर्नुपर्छ । यदि यस बिषयमा समितिले निर्णय गर्छ भने पक्कै पनि कम्पनीहरु यसमा सहमती हुनेछन् । अन्यथा कम्पनी आफैले यस बिषयमा निर्णय गर्न भने सक्दैन ।
बीमा कम्पनीहरुले बिना पूर्वधार शाखा खोल्न गरेको गुनासो सुनिन्छ नि । प्रतीस्पर्धाको लागि मात्र शाखा खोलिनु कतिको राम्रो हो ?
यो नराम्रो कुरा हो । प्रतीस्पर्धाको लागि मात्र कम्पनी खेलिदा कम्पनीले खर्च बढाईरहेको हुन्छ । यसले कम्पनीलाई घाटा पुराउँने काम गर्दछ । भोलीका दिनमा ग्राहकलाई सेवा सुविधा दिन सकेन भने कम्पनीको छविमा पनि नराम्रो धक्का लाग्छ । हाम्रो कम्पनीले त्यस्तो गरेको छैन । हामी पूर्व तयारीका बजारमा आएका छौ ।
तपाईको कम्पनीले कहिले देखी बोनश वितरण गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
नियम निती र समय अवधी अनुसारमा हामी बोनस वितरण गर्छौ ।
कम्पनीले बीमाको पहुँच बढाउन के गरेको छ ?
बीमा पहँच बढाउँन लागि हाम्रो कम्पनीले एउटा अभियान सुरुवात गरेका छ । विधार्थीसँग बीमा भन्ने कार्यक्रम हामीले देशव्यापी रुपमा अघि बढाएका छौ । यसको ब्रान्ड एम्बेसडरमा हरिवंश आर्चाय र मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई राखेका छौ । पूर्व विर्तामोड देखी महेन्द्रनगरमा पनि हाल उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको छ ।
बीमा समितले हालै ट्रेनिङ इन्टिच्यूट सञ्चालनमा ल्याएको छ ? यसले बीमा बजारको लागि जनशक्ति उत्पादन गर्नमा कत्तीको मद्दत पुग्ने देख्नुहुन्छ ?
बीमा समितीले सञ्चालनमा ल्याएको ट्रेनिङ्ग इन्स्टिच्यूटले बीमा बजारमा भईरहेको दक्ष जनशक्तिको समस्यालाई निराकरण गर्न सहयोगी भूमिका खेल्नेछ । यो एउटा टेक्निकल विषय भएको हुनाले बीमा बुझन चाहने व्यक्तिको लागि यस तालिमले बीमालाई नजिकबाट बुझन सहज पनि गर्दछ । यसको लागि म बीमा समितीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।
आगामी दिनमा कम्पनीलाई अघि बढाउन कस्तो रणनिती अपनाउनु भएको छ ?
कम्पनीलाई अघि बढाउन आधार भनेको कम्पनीको कर्मचारी हुन् । त्यसैले हामीले कर्मचारीको क्षमता बृद्धिमा विषेश ध्यान दिएका छौ । यसको उनीहरुलाई आवश्यकता अनुसार व्यसायिक तालिम तथा अभिप्रेरणा जगाउँने खालका तािलम पनि प्रदान गर्दै आएका छौ । यसका साथै हामी नयाँ प्रडक्ट जारी गर्नमा बढी सचेत छौ । अबका दिनमा पनि परम्परागत प्रडक्ट बजार लिन सकिदैन । त्यसैले हाम्रा कर्मचारी यस बिषयमा बढी केन्द्रित छन् । हामी हाम्रा सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा सुविधा र जतिसक्दो प्रविधिको प्रयोग गरी सरल र छरितो सेवा दिन तर्फ केन्द्रित भएका छौ ।
[email protected].com (for news)